Sakafo mahazatra an'ny Veracruz, fampifangaroana ny autochthonous miaraka amin'ny Hispanika | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 24/05/2021 13:15 | gastronomy, México
Ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz dia manana fototra lehibe vokatra an-dranomasina. Tsy zava-poana, io faritra io dia miorina ao amin'ny Helodranon'i Mexico ary, tsy vitan'ny hoe manana kilometatra amoron-tsiraka maro izy, fa koa ny tanàna manome azy ny anarany no manana seranana manan-danja indrindra ao amin'ny firenena.
I Veracruz koa no tanàna voalohany nanorenan'ny Espaniôla México. Noho izany, ny Singa Hispanika tena hita eo amin'ny gastronomie-ny io. Izany dia atambatra amin'ny fomban-drazana Mesoamerikana talohan'ny Columbian and with singa amin'ny nahandro Afrikana sy Karaiba hiteraka gastronomia mahery vaika satria matsiro amin'ny resaka tsiro. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz ianao dia mamporisika anao izahay hanohy hamaky.
1 Ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz: tantara vitsivitsy
2 Sakafo mahazatra an'ny Veracruz: ny lovia malaza indrindra
2.1 Trondro fampiasa Veracruz
2.2 Arroz a la tumbada, sakafo matsiro hafa amin'ny sakafo mahazatra any Veracruz
2.3 Namboarina na nipitika
2.4 Zacahuil na Sacahuil
2.5 Zanaka bitika
2.6 Ny mogo mogo
2.7 Ny mofomamy
Ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz: tantara vitsivitsy
Izay rehetra nolazainay taminao momba ny gastronomika Veracruz dia nampanan-karena, avy eo, miaraka amin'ireo vokatra nambolena tany amin'ny fanjakan'ny fanjakana, izay tena mahavokatra sy manana karazan-javakanto mahavelona tokoa noho ny toetr'andro tropikaly sy subtropika an'io.
Fa ny zavatra voalohany tianay holazaina aminao dia ny tantara kely momba ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz. Ny Espaniôla dia nitondra vokatra maro avy amin'ny sakafony. Anisan-dry zareo, tsaramaso, vary, varimbazaha ary voasarimakirana. Fa koa ny hena toy ny an'ny henan-kisoa na ny an'ny akoho ary firavaka toa azy oliva menaka ary ny tongolo gasy.
Raha vao tafaorina any amin'ny tany Veracruz dia nanomboka nanamboatra vokatra hafa ireo mpifindra monina vaovao, ny sasany efa nentin-drazana tamin'ny sakafo alohan'ny Columbian, fa ny sasany kosa tsy dia malaza. Anisan'izany ny katsaka, ny kafe sy ny voankazo toa mananasy, voanio, sapote, manga, zezika na voasary.
Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tonga ny mpifindra monina vaovao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay nanankarena ny gastr gastrikan'i Veracruz tamin'ny fomba amam-panao Arabo, Karaiba ary avy amin'ny Firenena eoropeanina. Izany rehetra izany dia niteraka karazany telo nahandro ao anatin'ny mampiavaka ity fanjakana meksikana ity. Andao hojerentsika izy ireo.
Sakafo kreôla misy fitaomana amerikanina afrikanina. Araka ny tondroin'ny anarany dia mampifangaro singa-pisakafoanana Espaniola, zanatany ary Afrikana izy. Io no maro an'isa ary, anisan'ireo vokatra mahazatra ampiasainy, ny mangahazo, izay nantsoin'ny Espaniola yam tena noho ny fisehoany mitovy amin'ity tuber afrikanina ity; ny katsaka; siramamy na zava-manitra toy ny voninkazo sy tamarind Jamaica.
Sakafo Huasteca. Miorina amin'ny fomban-drazan'ny tanànan'ny tanora, any amin'ny faritra avaratr'i Veracruz. Ny tena mpandray anjara dia ny katsaka miovaova isan-karazany toy ny fotsy, volomparasy na mena. Anisan'ireo fomba fahandro mahazatra azy ny zacahuill, tamale na koba, vita tsara amin'ny katsaka, izay feno hena avy amin'ny biby samihafa; ny mole de nopales ary ny ron-kena huasteco.
Sakafo Totilim. Mampiavaka azy ihany koa ny avaratra, miorina amin'ny katsaka, sakay ary tsaramaso. Anisan'ny lovia mahazatra azy ny karazana atoles (zava-pisotro miorina amin'ny katsaka talohan'ny andro Hispanika) sy koban.
Sakafo mahazatra an'ny Veracruz: ny lovia malaza indrindra
Araka ny efa nolazainay taminao, ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz dia manana fototra lehibe fish and seafood, fa misy koa matsiro saosy vita amin'ny vokatra eo an-toerana. Haneho anao ny sasany amin'ireo lovia ireo izahay.
Trondro fampiasa Veracruz
Io lovia io dia mampifangaro tsara ireo zavatra roa ireo: ny vokatry ny ranomasina sy ireo an'ny tany Veracruz. Izy io dia azo atao amin'ny trondro rehetra any an-toerana, manomboka amin'ny trondro alika ka hatramin'ny cabrilla amin'ny alàlan'ny snook, tilapia ary basal. Na izany aza, ny be mpampiasa indrindra dia ny Red snapper, fantatra amin'ny faritra hoe Red snapper, trondro haran-dranomasina matsiro be.
Na izany aza, ny tsiambaratelo an'ity fomba fahandro mahazatra ity dia ao amin'ny saosy, izay, mahaliana, dia iray amin'ireo vitsivitsy natao tany Mexico izay tsy mangidihidy. Ny akora ao aminy dia menaka oliva, ravina bay, sira sy dipoavatra, tongolo, voatabia, persily, tongolo gasy, oregano, oliva ary capers.
Tsotra ny fanomanana azy, satria, raha vao mahazo ny saosy dia atao miaraka amin'ireo trondro ao anaty lafaoro. Mba hanomezana azy mikitika moka dia azo ampiana cuaresmeño sakay ary nanompo tamin'ny vary fotsy na ovy. Tsy misy fisalasalana, mahagaga gastronomic.
Arroz a la tumbada, sakafo matsiro hafa amin'ny sakafo mahazatra any Veracruz
Arroz a la tumbada, iray amin'ireo foto-tsakafon'ny sakafo mahazatra an'i Veracruz
Afaka milaza isika fa mitovy amin'ny paella ny hazandranontsika, na dia manana ny mampiavaka azy aza. Ny akora ao anatiny, ankoatry ny vary, dia makamba, foza, sombin-kazo sy vokatra an-dranomasina hafa izay a sofrito vita amin'ny tongolo gasy, tongolo, voatabia ary dipoavatra mena. Ary farany, nohatsaraina tamin'ny ravina persily, oregano, coriander ary epazote ny tsirony.
Toa ny niandohan'ity lovia ity no tsy maintsy tadiavintsika amin'ny sakafon'ireo mpanjono izay, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia nanao ny asany tany amin'ny morontsirak'i Veracruz. Ary, amin'ny maha-te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa nantsoina «ho any am-pandriana» izy io hanondroana fa efa voaomana izy io lasopy.
Namboarina na nipitika
Tena malaza eo afovoan'ny faritra, tsy iza izy ireo tortillas katsaka miaraka amin'ny salsa eo amboniny ary voaravaka fromazy sy tongolo ranchero. Nahazo ny anaran'ny nanongo, marina tokoa, satria ny sisin'ny mofomamy dia mifintina mba tsy hianjera ny saosy.
Mitovy izy ireo valopy Namboarina tany amin'ny faritra sisa amin'ny firenena izy ireo ary, raha te hanana zavatra mahazatra hohanina ao Veracruz ianao dia amporisihinay izy ireo satria matsiro. Na izany aza, mazàna ny tompon-tany no mandray azy ireo desayuno.
Zacahuil na Sacahuil
El Tamale Malaza be izy io, tsy any Veracruz ihany, fa koa manerana an'i Mexico. Araka ny fantatrao dia katsaka nandrahoina nofonosina raviny. Na izany aza, ny zacahuil dia vokatry ny nahandro Huasteca, araka izay efa nolazainay taminareo.
Izany indrindra a goavambe tamale, angamba ny lehibe indrindra azonao jerena amin'ny firenena manontolo. Saingy manana tantara bebe kokoa izy io. Ny koba katsaka dia voaomana amin'ity fomba fahandro ity, toy ny fanaon'ny tompon-tany taonjato maro lasa izay. Noho izany, dia miteraka lamesa antsoina hoe nixtamal izay kely ny voam-bary ary misy endrika bika kokoa.
Ity koba ity dia feno henan-kisoa, sakay ary henan-kisoa na henan-kisoa, ankoatry ny akora hafa. Ity farany dia vorona lehibe teratany amerikanina izay manana endrika turkey.
Ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz dia misy koa lasopy tena matsiro sy mameno. Izany no tranga chopachole, izay avy amin'ny nahandro frantsay no niandohany. Satria tsy resaka zavatra hafa ankoatry ny iray lasopy hazan-dranomasina Namboarina tamin'ny trondro sy foza (foza manga mahazatra avy amin'ny morontsiraka Veracruz).
Na izany aza, mahery kokoa ny ampon-dranomasina noho ny ron-dranomasina nentim-paharazana. Ho an'ny vao manomboka, omena tsy tapaka miaraka koba katsaka. Ary, ankoatr'izay, manana tongolo, sakay maina, voatabia, tongolo lay ary epazote izy. Ireo akora rehetra ireo dia manome endrika mitovy aminy atole, fisotroana fiaviana alohan'ny Hispanika izay efa noresahinay, na dia mamy araka ny lovantsofina aza izany.
Maivana kokoa ny Izote voninkazo voninkazo. Ny fotony dia ity zavamaniry any Amerika Afovoany ity ary matetika koa dia mitondra makamba, chives, voatabia, epazote ary sofina pipian. Ary izy ireo dia pasta namboarina tamin'ny voa voatavo, izay ampiasaina amin'ny lovia hafa ihany koa.
Ny mogo mogo
Mongo akondro, sakafo matsiro iray hafa amin'ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz
Anisan'ireo lovia mahazatra an'ny Veracruz, ity dia mety iray amin'ireo miharihary indrindra Fakany afrikanina. Satria, antsoina koa machuco, tsy inona izany fa puree main'ny plantain.
Mba hanaovana azy, ireo miaraka amin'ny hodiny dia masaka anaty rano mangotraka. Rehefa mipoaka ny fonony dia esorina izy ireo ary ampiana dibera sy sira hanorotoroana mandra-pahatonga azy ireo hanana endrika mety. Saingy mbola tsy vonona io lovia io. Avela hangatsiaka ao anaty vata fampangatsiahana ny «puree» hanamafisana ary avy eo handrahoana azy. Matetika izy io dia hatolotra ho sisin'ny tsaramaso.
Raha matsiro ireo lovia efa noresahintsika hatrizay, ny pastry Veracruz dia tsy ao aoriana lavitra. Saika ny resipeony rehetra dia mifototra amin'ny vary ary, anisan'ireo vatomamy mahaliana indrindra, hotononinay ny chogostas, baolina sasantsasany izay manana tanimanga azo fihinana ary ny fiaviany dia nanomboka tamin'ny andro talohan'i Hispanika.
Ny nentim-paharazana dia duchesses, karazan-kapafa feno meringue voanio, ary ny masafins, polvorone sasany rakotra siramamy sy kanelina. Ho azy, tetamal Izy io dia koba katsaka sy siramamy misy tsiro miaraka amin'ny anise ary aroso mafana ary fonosina ravina berijao.
La voatavo Izy no protagonista an'ny vatomamy Veracruz maromaro. Izany no tranga fritters, na dia eo aza izany, ny gullet, izay feno meringue. Ary farany, ny pemoles donin-katsaka, dibera sy siramamy izy ireo ary ny marzipan avy any Veracruz Mampiavaka azy ny fananana voanjo fa tsy amandy.
Efa nolazainay taminareo izany atole, izay amboarina amin'ny tsiro samihafa arakaraka ny voankazo izay nanomanana azy. Noho izany, afaka miresaka aminao izahay momba ny atole akondro, voatavo, katsaka na coyol (voankazo mitovy amin'ny voanio). Izy io koa dia laniana ao Veracruz the horchata, na dia tsy vita tahaka ny any Espana aza. Ao no anaovana azy amin'ny vary sy kanelina na lavanila.
Ny mahazatra kokoa dia ny zava-pisotro toa menyul, vita amin'ny mint, ary ny popo. Ity farany dia ho matsiro, satria misy kakao, vary, kanelina ary voankazo toy ny azquiote. Ary farany, ny omby Izy io dia cocktail misy alikaola izay misy akora vita amin'ny cane, ronono miharo menaka sy dibera voanjo, na dia amboarina amin'ny tsiro hafa toy ny manga aza izy io.
Ho famaranana, efa nilaza taminareo ny momba ny sakafo mahazatra an'i Veracruz. Araka ny ho hitanao, dia misy lovia isan-karazany, izay matsiro kokoa. Fa i Veracruz dia tsy misongadina amin'ny maha-gastrie azy fotsiny, fa ilaina ny fitsidihana azy, mamporisika anao izahay hijery koa inona no hitsidika an'i Veracruz. Raha tsy sahy manao izany ianao noho ny fetran'ny areti-mifindra, ity misy lahatsoratra iray momba ny fepetra takiana hitetezana firenena ka azonao atao tsy misy tahotra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » México » Sakafo mahazatra an'ny Veracruz
Aiza no haleha amin'ny volana Mey: Toerana 10 tsara indrindra